Zvivakire Kiredhiti Kiredhiti Iwe - Dun & Bradstreet & DUNS Nhamba
D&B ndeimwe yenzira dziri nyore dzekuvhura bhizinesi chikwereti chimiro. Izvi zvinotanga nekuwana iyo DUNS nhamba. Isu tinoenda kuburikidza neese maitiro uye nekupa zvese ruzivo iwe rwaunoda kuti uzive mune ino chikamu chekambani kiredhiti yekuvaka maitiro. Zvakakosha kwazvo kuti iwe uverenge uye unzwisise nhanho yakakosha iyi uye wotumira kambani yako nemazvo. Izvi zvinogona kuitirwa mahara, zvisinei iwe unogona kubhadhariswa kuti uchinje ruzivo, saka zvakakosha kuti iwe utarise kune zvakadzama.
Kuwana Yako DUNS ™ Nhamba
Pane nzira mbiri dzekutora yako DUNS ™ Nhamba kubva kuD&B. Unogona kuve neRUSHURE sevhisi kubva kuD&B, kana kusarudza kuti nhamba yako ipiwe zuva rimwe chete rebhizinesi ne $ 299 kusvika $ 799. Rangarira kuti iyo yose yekambani yekuvaka chikwereti maitiro inokutora iwe mwedzi yakati wandei, saka kubhadhara D&B panguva ino, hakuzoite kuti zvinhu zviitike chero munguva pfupi mumufananidzo muhombe. Pachine mamwe masangano maviri ayo achafanirwa kuvharwa mushure meD & B, Experian neEquifax.
YEMAHARA DUNS ™ Nhamba - Tora DUNS ™ Nhamba mahara. Izvi zvinotora mazuva angangoita makumi matanhatu. Paunosarudza iyi yemahara sevhisi, mushure mekupedza fomu fomu, iwe unozopihwa imwe sarudzo yekubhadhara yekukurumidza kugadzirisa. Iwe unopihwa sarudzo yekuti uve nenhamba yako mumazuva mashanu ebhizinesi kwemadhora makumi mana nemasere kana mumazuva makumi matatu ebhizinesi pasina muripo. Zvekare, kuve neyako D & B nhamba nekukurumidza hakumhanyisa maitiro ese ekuvaka bhizinesi kiredhiti, saka zviri kwauri.
D&B Chikwereti Mbiri - Unogona Gadzira D&B nhoroondo yechikwereti sebasa repakeji kwaunowana yako DUNS ™ nhamba uye chimiro chakagadzirwa zuva rimwe chetero.
Nebasa remahara, iwe unozopedzisira uine mhedzisiro yakafanana. Iwe unozoudzwa kuti kana iwe usina kubhadhara iyo D&B sevhisi sevhisi iyo account yako haina kuvhurwa. Izvi ndezvechokwadi, zvisinei kana iwe uchinge uine mumwe mutengesi kana mukweretesi mushumo chiitiko, yako nhoroondo inogadzirwa uye account inoitwa ipapo.
Maitiro eD & B
Paunosarudza kuve neyako DUNS ™ nhamba inogadzirwa mahara, unozofonerwa neD & B kuitira kuti iwe ubhadharire chimiro chako. Iwe unozoudzwa kuti iwe unoda nhoroondo kubva kuD&B kuti uwane chikwereti chekambani uye iwe unofanirwa kubhadhara kuitira sevhisi kuitira kuti zviitike, izvo zvatakatotsanangura kuti hazvisi zvechokwadi. Iwe unowana yako DUNS ™ nhamba yemahara, unogona kudhonza yako wega mushumo uye kana iwe uine mutengesi kana mukweretesi mushumo, yako nhoroondo inogadzirwa uye inomisikidzwa ipapo.
Wakatove Uine DUNS Nhamba?
Kana iwe ukawana yako kambani mushure mekuita yekutsvaga kweD&B, unogona kutarisa kuti uone kana account yako yakavhurwa nekutenga Kambani Mbiri Rekodhi, ye $ 12.99. Kana kambani yako isina chimiro, mushumo hauzogadzirirwa iwe uye kiredhiti kadhi yako haibhadhariswe.
Kana iwe watove wakasimbisa kuti yako nhoroondo iri kushanda, unogona kuwana kopi yako D&B kiredhiti ripoti mahara kana muripo
Rated uye Isina Rated DUNS Manhamba
Kana iwe ukataura naDun naBradstreet, iwe unozoudzwa kuti yemahara DUNS ™ nhamba chiziviso chisina-chakatemerwa, chausingakwanise kushandisa kuvaka chikwereti chekambani nacho. Iwe zvakare uchaudzwa kuti kana iwe uchida iyo yakatemwa nhamba iyo iwe yaunogona kushandisa kukudziridza bhizinesi kiredhiti, iwe unofanirwa kuenda kuburikidza yavo yekusimbisa maitiro nemutengo we chero kupi pakati pe $ 329 ne $ 799. Unogona kuenzanisa iwo maviri masevhisi mazinga pano:
DNB Chikwereti Chakavaka - Iyi ndiyo $ 329 chirongwa chekuvaka chikwereti kubva kuDNB.
DNB Chikwereti Chakavaka Uyezve Iyi ndiyo $ 599 chirongwa chekuvaka chikwereti kubva kuDNB.
Izvo Zvaunoda Kuziva Nezve DNB
DNB rutsigiro inoumbwa nekomisheni vamiriri vekutengesa Iwe unozoudzwa kuti haugone kuvaka chikwereti nenhamba yeDUNS kunze kwekunge iwe uchitenga chirongwa chekuvaka chikwereti uye nekufamba nenzira yavo yekusimbisa. Izvi hazvisi zvechokwadi. Yako DUNS nhamba ndiyo yako nhamba uye kana uine zvekutengeserana mareferensi nemasangano ekuzivisa, nhoroondo yako inokura.
Iwe uchaudzwa zvinotevera: Iyo yemahara DUNS nhamba irondedzero neD&B, asi kwete kunyoreswa kwakazara. Izvo hazvina kukodzera kufungidzira chikwereti zvikwereti kana chikwereti ratings. Iwe unozoudzwa nezve maviri mapurogiramu ekuvaka zvikwereti akanyorwa pamusoro pamwe nerimwe danho rebasa reDNB i $ 799 kwaunogona kuwedzera nhamba isingaverengeki yezvinongedzo zvekutengeserana zvebhizinesi rako. Izvi hazvidiwe kuvaka bhizinesi kiredhiti kana kutogadzira yako yemakambani kiredhiti kiredhiti. Tora nhamba yako kubva kuDNB uye uenderere mberi nekuvaka chikwereti chekambani iwe pachako.
>> Enderera kune Inotevera Nhanho mukati Kuvaka Kiredhiti Kiredhiti - Experian >>